२ क्लिकहरूमा Adobe Audition नि: शुल्क डाउनलोड
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Nepali Blog > Adobe Audition नि: शुल्क
द्वारा Ann Young, Naveen Pokhrel 2021-07-12, Nepali Blog
इजाजत पत्र: परीक्षण संस्करण
अनुकूल: म्याक / विन
जब तपाईं Adobe Audition निःशुल्क सुन्नुहुन्छ, तपाईं सम्भावित स्रोत स्रोतहरूको बारेमा सोच्नुहुन्छ, हैन? के हुन्छ यदि मैले तपाईंलाई २ क्लिकमा अडियो र संगीत उत्पादन गर्ने सफ्टवेयरको नयाँ संस्करण प्राप्त गर्न कानूनी तरिकाको बारेमा बताएको छु?
नि: शुल्क Adobe Audition लाभ:
अन्य Adobe अनुप्रयोगहरूसँग कडा एकीकरण
ब्याच सम्पादन समर्थन गर्दछ
तपाईं ध्वनि ट्र्याक सुधार गर्न प्लग-इनहरू थप्न सक्नुहुनेछ
धेरै कलात्मक अडियो प्रभावहरू
यदि तपाईंसँग अझै प्रश्नहरू छन् भने, कृपया यी प्रायः सोधिने प्रश्नहरू पढ्नुहोस्। म पक्का छु कि तपाईंले ती मध्ये धेरैमा उत्तरहरू भेट्टाउनुहुनेछ।
के म एक भन्दा बढी पटक नि: शुल्क परीक्षण प्रयोग गर्न सक्छु?
होइन, नि: शुल्क परीक्षण क्रिएटिभ क्लाउड मा प्रत्येक अनुप्रयोग को लागी एक पटक मात्र उपलब्ध छ।
के म मेरो सदस्यताहरूमा कुनै छूट पाउन सक्छु?
हो, Adobe विद्यार्थी र शिक्षकहरूको साथ धेरै उदार छ र तिनीहरूलाई एक चयनित योजना मा 60% सम्म छुट छ। यसका साथै बिभिन्न बिदाका लागि तपाइँ आधिकारिक Adobe वेबसाइट भ्रमण गर्नुपर्दछ।
के हुन्छ यदि मैले सफ्टवेयर स्थापना गरेको छु तर यो मेरो पीसीमा चल्दैन?
यस्तो लाग्दछ कि तपाईंको पीसीले न्यूनतम प्रणाली आवश्यकताहरू पूरा गर्दैन, तिनीहरूलाई जाँच्न नबिर्सनुहोस्। यो मालवेयर (भाइरस) को साथ जोडिएको हुन सक्छ जुन तपाईको पीसीमा छ।
जे भए पनि, तपाइँले समर्थनमा सम्पर्क गर्नुपर्छ र तिनीहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ किनकि प्रत्येक केसमा फरक दृष्टिकोण हुन सक्छ।
अडोब अडिटन प्रणाली आवश्यकताहरू हेर्नुहोस्
म क्र्याकको साथ किन Adobe Audition नि: शुल्क प्रयोग गर्न सक्दिन?
हामी सबैले सायद आफैंलाई यस्तो प्रश्न सोध्यौं, किनकि यसले तपाईलाई सबै पैसा बचत गर्नेछ। मलाई विश्वास छ कि यस प्रोफेशनल सफ्टवेयरको लागि १० महिना एक महिना ठूलो सौदा हो, यद्यपि धेरै व्यक्तिहरू असहमत हुन्छन् र यसलाई अस्वीकार्य ठान्छन्।
एक महिनाa१० वा एक $ १,००० जरिमाना छ?
धेरै वर्ष अघि, भेरिजन, एटीएमटी, टी, केबलभिसन, कमकास्ट र समय वार्नरले प्रतिलिपि अधिकारयुक्त कामको अवैध वितरणको बिरूद्ध लड्न एउटा प्रणाली ल्याएको छ। यसको पछाडिको कारण यो अवैध सफ्टवेयर प्रयोग गर्न कति लोकप्रिय भएको थियो।
यसमा के समावेश छ भनेर सोच्नुहोस्? सबैभन्दा पहिले तपाईंले भेट्नुहुने चीज तपाईंको इनबक्समा चेतावनी हो। यदि, तथापि, तपाईं टोरेन्ट स्रोतहरू प्रयोग गर्न जारी राख्नुभयो भने, तपाईंको प्रदायकले तपाईंलाई विच्छेदन गर्नेछ, र, अन्तमा, तपाईंलाई अदालतमा बोलाउनेछ।
तिमीलाई थाहा छ? कसैले अदालतमा तपाईंलाई कुनै चेतावनी दिदैछ, तपाईंले you १,००० जरिवाना तिर्नु पर्छ। अब फेरि सोच्नुहोस् कुन चाँहि राम्रो छ, $ or० वा or १,०००?
भाइरसहरूको साथ अनुभव अनुभव प्राप्त गर्नुहोस्
त्यसैले तपाईंले टोरेन्ट ट्र्याकरबाट तपाईंको नि: शुल्क एडोब अडिशन डाउनलोड गर्नुभयो। अब तपाइँ विज्ञापनहरू मार्फत कुर्नु पर्छ, अनुप्रयोग सुरू गर्न वा केहि गर्नका लागि, र त्यसपछि सन्देश पप अप हुन्छ जुन तपाईंको प्रणाली लोड हुन सकेन।
यो सबै भाइरसहरूको कारणले हो कि ह्याकरहरूले तपाईंको “निःशुल्क” सफ्टवेयरको साथ निर्माण गर्दछ। हामी मध्ये धेरैले हाम्रो जीवनको कुनै पनि बिन्दुमा भाइरससँग व्यवहार गर्नुपर्‍यो, र हामीलाई थाहा छ कि एक राम्रो कम्प्युटर रिपेर्मनले तपाइँको मासिक सदस्यता भन्दा तपाइँको लागत अधिक हुनेछ।
अद्यावधिकहरूका बारे बिर्सनुहोस्
यदि तपाईंले कहिल्यै गैरकानुनी सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुभएको छ भने, तपाईंलाई सायद थाहा छ कि पाइरेटेड प्रतिलिपि कानूनी भन्दा फरक छ, किनकि पछि अद्यावधिक हुन सक्दैन। तपाईंको संस्करण सँधैको लागि विच्छेदन हुनेछ र कुनै अपडेटहरू डाउनलोड हुनेछैन।
ADOBE AUDITION संस्करण नि: शुल्क अपडेट गर्नुहोस्
तपाईंको लागि कुनै ग्राहक समर्थन छैन
तलको अवस्थालाई कल्पना गर्नुहोस्: तपाईको नि: शुल्क Adobe Audition सुरु हुँदैन, वा, हुनसक्छ, तपाईले नियमित प्रयोग गर्नुहुने उपकरणहरू हराइसकेका छन्, अनुप्रयोगले जवाफ दिन छाडेको छ र प्रयोग गर्न असम्भव छ।
यदि तपाईं कानुनी सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं टेक्निकल समर्थनलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि उपलब्ध प्रबन्धकलाई कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र मिनेटमा खराबीको कारण पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं एक अवैध संस्करण प्रयोग गर्नुहुन्छ, जे होस्, तपाईंलाई सहयोगमा अस्वीकृत गरिनेछ।
बग र लगहरू तपाईंको सबैभन्दा मिल्ने साथी हुन्
यो तपाइँको लागि एक आश्चर्यको रूपमा आउन सक्छ, तर ह्याकरले सफ्टवेयरको स्रोत कोडलाई यसमा एउटा टोरेन्टमा अपलोड गर्नु अघि परिवर्तन गर्दछ।
तिनीहरूले केही सम्पादन नियन्त्रणहरू परिमार्जन गर्छन् र क्रम पनि भ break्ग गर्न सक्दछन्। कल्पना गर्नुहोस् कि कसैले तपाईंको कुर्सीबाट केही स्क्रूहरू हटायो त्यसैले अर्को पटक जब तपाईं यसमा बस्नुहुन्छ, तपाईं अवश्य गिर्नुहुनेछ र तपाईंको कुर्सी भाँचिनेछ।
Free नि: शुल्क Adobe Audition विकल्पहरू
यदि तपाईंले अडियो र संगीत सिर्जनाको लागि सफ्टवेयरको साथ कहिले पनि सम्झौता गर्नुपर्‍यो भने, तपाईंलाई थाहा छ तिनीहरू कति जटिल हुन सक्छन्। दर्जनौं बिभिन्न अनुप्रयोगहरूमा जानको आवश्यकताबाट तपाईंलाई बचाउनको लागि, मैले माथि शीर्ष5उत्कृष्ट Adobe Audition निःशुल्क विकल्पहरू चयन गरेको छु।
श्रममुक्त प्रयोग गर्नुहोस्
धेरै अडियो सम्पादन विकल्पहरू
संवाद, ध्वनी प्रभाव र काट्ने संगीत ट्र्याकहरूको लागि उत्तम
मल्टिटरैक रेकर्डि Supp समर्थन गर्दछ
अडिसनको तुलनामा सीमित सुविधा सेट
गैर विनाशकारी सम्पादन समर्थन गर्दैन
यदि तपाईं पोडकास्ट वा रेकर्ड स start्गीत सुरू गर्न चाहानुहुन्छ, वा तपाईंलाई केही अडियो नमूनाहरू कम्पाइल र रूपान्तरण गर्न केवल उपकरण चाहिन्छ भने अडीसिटी तपाईंको लागि उत्तम विकल्प हुनेछ।
यो खुला स्रोतको साथ एक शक्तिशाली नि: शुल्क अडियो सम्पादक हो, जुन सबैका लागि नि: शुल्क उपलब्ध छ। धृष्टताले आवाजमा राम्रोसँग राम्रोसँग काम गर्दछ 32२ बिट /4384 kHz निर्मित एन्टि-एलाइजिंगको साथ।
यो आयात गर्न सजिलो छ, मिक्स र अडियो ट्र्याक संयोजन (स्टीरियो, मोनो वा पनि मल्टिटरैक रेकर्डि)), र एकल अडियो को रूपमा आउटपुट खेल्दछ।
यो उत्कृष्ट Adobe Audition नि: शुल्क वैकल्पिक पनि चयन को स्तर मा लचिलो सम्पादन प्रदान गर्दछ, साथ साथै स्पेक्ट्रोग्राम र वर्णक्रिया दृश्य तपाई आवृत्ति विश्लेषण गर्न।
AV AUDIO EDITOR नि: शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
प्रतिबन्ध वा वाटरमार्क बिना नि: शुल्क
ठाडो शिक्षण वक्र
केही उपकरणहरूलाई शोधनको आवश्यक पर्दछ
यसको माथिको टुल प्यानलको साथ सरल ईन्टरफेस छ जसले सजिलैसँग प्रत्येकलाई पहिचान गर्न सम्भव बनाउँदछ।
उपकरणहरूको सेट आधारभूत अडियो सम्पादन उपकरण, प्रभाव र presets को संग्रह हो।
यस अडियो सम्पादन अनुप्रयोगको सब भन्दा अनौंठो सुविधाहरू मध्ये एक "मिक्स" ट्याब हो।
यसले संगीतको व्यवस्थाको लागि विन्डो खोल्छ र तपाईंलाई एकै समयमा धेरै अडियो ट्र्याकहरू सम्पादन गर्न र मिक्स गर्न अनुमति दिन्छ।
यो दुई वा अधिक आवाज स्रोतहरूको साथ पोडकास्ट सम्पादन गर्नका लागि धेरै सहयोगी हुनेछ। यस ट्याबमा, तपाई ध्वनीलाई अलग ट्र्याकमा विभाजन गर्न सक्नुहुनेछ, भोल्युम र एम्पलीफिकेशन नियमित गर्नुहोस्, आवाजलाई सामान्य बनाउनुहोस्।
REAPER नि: शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
कुनै एकीकृत उपकरण वा छोराहरू छैनन्
रेपरले ध्वनिलाई वास्तविक समयमा रेकर्ड गर्न अनुमति दिन्छ, तपाईंलाई भर्चुअल उपकरणहरू र पूर्ण मिक्सि con कन्सोल प्रदान गर्दछ, वास्तविक संकेतन सम्पादन र तपाईंलाई भ्वाइस-ओभरहरू गर्न दिन्छ।
धेरै अन्य प्रतिस्पर्धी DAW को विपरीत, तपाईं यसलाई आफ्नो मेनुहरू, प्यानलहरू, उपकरणहरू र म्याक्रोहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। साथै, तपाईं इन्टरफेसको छाला र रंग विषयवस्तु परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।
यद्यपि, तपाईंले यो याद गर्नु आवश्यक छ कि रेपर एउटा जटिल अनुप्रयोग हो, जसलाई सिक्नको लागि समय चाहिन्छ, त्यसैले यो शुरुआतको लागि उपयुक्त छैन।
अर्डर निःशुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
प्लगइनहरू समर्थन गर्दछ
भर्चुअल मिडी उपकरणहरू सिर्जना गर्दै र खेल्दै
कुनै भर्चुअल मिडी कीबोर्ड छैन
नमूना रेकर्डि। छैन
यदि तपाईं खुला स्रोतको साथ केहि प्राथमिकता दिनुहुन्छ, तर तपाईं ऑडेसिटीले के प्रस्ताव गर्नु भन्दा बढी चाहानुहुन्छ, त्यसो भए म अर्डरलाई खोज्ने सल्लाह दिन्छु।
यो निर्माण गर्न र सम्पादन गर्न धेरै उपयोगी सुविधाहरूको साथ एक पूर्ण कार्यात्मक कार्य स्टेशन हो। यो तपाइँको लागत $0र पूर्ण खुला स्रोत संग आउँछ।
अनुप्रयोगले VST, Ladspa र lv2 जस्ता व्यावसायिक रूपमा उपलब्ध प्लगइनहरूको ठूलो सम्झौता प्रक्रिया गर्न सक्छ। मलाई यो तथ्य पनि मनपर्दछ कि तपाईं ज्याक-सर्भर, ओएससी नियन्त्रकहरू र मिडी जडान गर्न अन्य अनुप्रयोगहरू र उपकरणहरूसँग सिन्क गर्न सक्नुहुन्छ।
OCENAUDIO नि: शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
ईन्टरफेस खाली गर्नुहोस्
उपयोगी स्पेक्ट्रोग्राम र फाइल विश्लेषण
प्रभाव स्ट्याकिंग समर्थन गर्दैन
यस नि: शुल्क अडियो सम्पादकसँग मास्टरिंगको लागि उपकरणहरू छन् र नयाँ प्रयोगकर्ताहरूलाई अतिभारित नगरीकन तपाईंलाई एकै समयमा धेरै ठूला फाईलहरू प्रशोधन गर्न अनुमति दिन्छ।
Ocenaudio एकिकृत फिल्टरहरूको चयनको साथ आउँदछ र VST प्लगइनहरू समर्थन गर्दछ, ताकि तपाईं थप थप्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि मलाई यो तथ्य मनपर्दैन कि यो खुला स्रोत होईन।
श्रव्यता विपरीत, तपाईं यसको कोड ट्वीक गर्न सक्षम हुनुहुने छैन, यदि यो तपाईंको विशिष्ट आवश्यकताहरू पूरा गर्दैन भने।
एडोब अडिशन नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्
म्याक / विनमा नि: शुल्क Audition डाउनलोड गर्नुहोस्
Adobe Audition डाउनलोड गर्नुहोस् र days दिनको सदस्यता लिनु अघि यसलाई परीक्षण गर्नुहोस्। म निश्चित छु कि तपाईं यसको ईन्टरफेस र सजिलो भिडियो हराइरहेको सुविधाहरू र उपकरण सेटसँग सन्तुष्ट हुनुहुनेछ।
Adobe Audition फाइदाहरू
नि: शुल्क Audition डाउनलोड गर्नुहोस्